Seychelles ပြင်ပမျက်နှာဖုံးမူဝါဒ | ဆေးရှဲလ်
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » နိုင်ငံ | တိုင်းဒေသကြီး » seychelles » Seychelles သည် ပြင်ပမျက်နှာဖုံးမူဝါဒကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ခရီးလမ်းဆုံး • အစိုးရသတင်းများ • ကျန်းမာရေး • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • သတင်း • seychelles • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ဓာတ်ပုံအား Seychelles Dept. of Tourism မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ပြင်ပမျက်နှာဖုံးများ ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ယခုအခါ ရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဧည့်သည်များသည် သက်သာရာရသွားကြသည်။ seychelles.
ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားသောဧည့်သည်များကိုအနုတ်လက္ခဏာ PCR စမ်းသပ်မှုတင်ပြစရာမလိုဘဲ ဦးတည်ရာသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးနောက် (၃)လအကြာတွင်၊ Seychelles သည် အများသူငှာနေရာများတွင် မဖြစ်မနေဝတ်ဆင်ထားသော အပြင်ဘက်မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖယ်ရှားရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
သို့သော် အများသူငှာ တက္ကစီ၊ လှေများနှင့် လေယာဉ်များကဲ့သို့ အများသူငှာ ဘတ်စ်ကားများနှင့် အခြား အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခရီးစဉ်များတွင် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာဖုံးများကို တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။
Destination Marketing ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စစ် Bernadette Willemin မှ ပြောကြားရာတွင် ဦးတည်ရာသည် ခိုင်မာသော အပ်နှံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း၊ လုံခြုံသောခရီးသွားလုပ်ငန်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အလျဉ်းသင့်လို့ လာရတာကို သူမကျေနပ်ပါတယ်။
"အားလပ်ရက်ခရီးဆုံးနေရာအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိပ်တန်း ပဋိဉာဉ်များတွင် ပြန်လည်ထားရှိရန် ဤဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။"
“ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ဥရောပတိုက်သားများအတွက် နွေရာသီလများဖြစ်ပြီး အများစုအတွက် အားလပ်ရက်များဖြစ်သည်။ Seychelles သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေသကဲ့သို့ ခရီးသွားများသည် မျက်နှာဖုံးစွပ်ခြင်းအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်တော့ဘဲ ဤဖြစ်ရပ်များကို လိုက်လျှောက်နေပါသည်။ ဤထူးခြားသောလှုပ်ရှားမှုသည် Seychelles ကိုပိုမိုလက်လှမ်းမီပြီး အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံခြုံသောခရီးသွားလုပ်ငန်းကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဦးတည်ရာသည် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များ သတိရှိရှိနေထိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ၎င်းတို့၏ သန့်ရှင်းရေးအစီအမံများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တိုက်တွန်းသွားပါမည်” ဟု မစ္စစ်ဝီလမင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အကယ်၍ ဦးတည်ရာသည် COVID-15 ကူးစက်မှုအသစ်များ တိုးလာသည်ကို ထိုအချိန်အထိ မမှတ်တမ်းတင်ပါက ဒစ်စကိုကေးများ နှင့် စုဝေးပွဲများဆိုင်ရာ လက်ကျန်ကန့်သတ်ချက်များကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်အထိ ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
လုံခြုံသောအားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်၊ Seychelles သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံကာဗာအပြင် ခရီးသွားအာမခံလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး လက်မှတ်ရထားသောတည်းခိုခန်းတွင် ၎င်းတို့၏တည်းခိုရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ ထို့အပြင် ခရီးသွားဧည့်သည်များအားလုံး ခရီးသွားခွင့်မပြုမီ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ seychelles | ကျန်းမာရေး | Covid-19
သင့်နွေရာသီအားလပ်ရက်အတွက် မရှိမဖြစ်ရှိထားရမည့် ခရီးသွားအက်ပ် ၅ ခု Covid-19|
Pegasus လေကြောင်းလိုင်း အမှုဆောင်သစ် IATA ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်လာသည်။ Covid-19|
Club Med သည် Marbella တွင် နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အတွင်း ၎င်း၏ပထမဆုံးစပိန်အပန်းဖြေစခန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ seychelles|
မထွက်ခွာမီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု လိုအပ်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်သို့ ဧည့်သည် ၅.၄ သန်း ထပ်တိုးလာသည်။ Covid-19|
Seychelles သည် စျေးကွက် blitz ဖြင့် အရှေ့ဥရောပကို သိမ်းပိုက်သည်။ seychelles|
Covid-19 ကျန်းမာရေး seychelles
ထရီနီဒက် နှင့် တိုဘာဂို သို့ အိန္ဒိယ လူများစု ခရီးစဉ်...
TIME ဟိုတယ်များသည် UAE၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အီဂျစ်နှင့်...
နာတာရှည်နာကျင်မှုအပေါ် Virtual Reality ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုအသစ်
Malta တွင် အဆုံးမဲ့နွေရာသီကို ခံစားလိုက်ပါ။
ယခုအခါ မွန်တီနီဂရိုးနှင့် ကာဇက်စတန်တို့သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မျက်စိကျနေကြသည်။
ယူကရိန်းအတွက် ကြွေးကြော်သံ WTTC အဖွဲ့ဝင် Taskforce အစည်းအဝေး
Scenic Group ၏ ဒုဥက္ကဌအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်...
IMEX တွင် Global Game-Changers ၏ Stellar Lineup...
Chicago Midway မှ Tweed-New Haven သို့ မရပ်မနား ပျံသန်းခြင်း...
စိတ်လျှော့ပြီး ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ- အမေရိကန်တွေ အခုသွားနေတဲ့နေရာ...
Bipolar အတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော သွေးစစ်ဆေးခြင်း စမ်းသပ်ခြင်း...
Costa Cruises သည် ၎င်း၏ LNG ပါဝါသုံး စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အဆင့်မြင့် သင်္ဘောသစ်ဟု အမည်မှည့်ခေါ်သည်...
သမိုင်းဝင် Bridgetown Barbados- သူ့ဘာသာသူ ခရီးထွက်ရကျိုးနပ်သည်။
Exuma မှ သေဆုံးမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်...
Maltese Tenor Joseph Calleja နှင့် Plácido Domingo တို့အား...
Sandals Resorts သည် ရည်မှန်းချက်ကြီးသော အစီအစဉ်များကို တစေ့တစောင်း ကမ်းလှမ်းသည်...
Fraport- Terminal2တွင် Lounge အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
United လေကြောင်းလိုင်း Newark – Zurich လေယာဉ် UA134...
ကာတာဟိုတယ်များသည် 2022 ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် လိင်တူချစ်သူ ခရီးသွားများကို မလိုလားကြပေ။
Intermodal ခရီးသွား- ဘေးကင်းပြီး ချောမွေ့သော ခရီးများ...